Isikhokelo sokuDorm i-Dorm Room Essentialals
Yintoni onokuyifumana, yintoni ukuyehla
Xa kuziwa ekufakeni i-dorm ekolishi, ungayinakunqumla loo majelo amacwecwe enqabileyo kunye neendawo ezinobungakanani bendawo yokulala, izitya ezidibeneyo, izitrafti ezixutywe kunye neefomthi ezilenga ezindongeni. Amagumbi okulala akhangelekanga njengaye. Indlu yakho yeveki kude nekhaya iya kuba yiseli ye-10x10 eyabelwanayo eneenkqantosi ezinobumba obude ezizeleyo, izifuba zabadwebi, iidesksi kunye nee-wardrobe. Ifenitshala eyongezelelweyo? Iyahlekisa lonto. Kwaye akukho mntu uvunyelwe ukubetha izipikili kwiindonga. Nantsi into ekufuneka uyenze ukuyithenga (kunye neloluhlu olukhuphayo lokuthatha kunye):
ML Harris / Iconica / Getty Izithombe
Uninzi lwezidumba zinamabhedi angama-adide adibeneyo, ngoko mhlawumbi uya kufuna ama-twin ama-twin ama-sheets, imilenze, ukukhupha okucokisekileyo okanye iingubo, kunye ne-foam pad ukuze unciphise i-mattress. Ngokuyinhloko ishidi elifakiweyo elifuna ukuba lide ixesha elide. Iphepha eliphezulu lingaba ubude obuqhelekileyo, kwaye unokuba ungayifuni nenye xa umntwana wakho esebenzisa i-duvet kunye nekhava elihlawulelwayo. Londoloza iidola ezimbalwa ngokusebenzisa i-foam yobude obuqhelekileyo okanye ipakethi yesikhokhelo seqanda - kuya kuba ngamasentimitha ambalwa amancinci, kodwa emva kokuba iikripthi zikhona, umntwana wakho akayi kubona. Kwiingcamango zethu zabazali, abantwana bayahlamba impahla. Ehlabathini lenene, baya kutshintshela iifomathi ubuncinane kanye ukuba uquka isethi yesibini. Yaye ukuba umntwana wakho uhamba kwiindawo ezinqabileyo, enye yezo setethi ingaba yinto epholileyo.
Eyona Nenene, eyiyo eyiyo iAlarm Clock
Ifoto nguJackie Burrell
Abanye abantwana bangasetha i-alamu kwi-smartphone yabo, baxhamle ebhedeni baze bathathe i-8 kwiklasi. Kodwa ukuba unomntu omtsha uRip Van Winkle, intsana eyayimelwe ukuba i-cajoled, isongelwe ize ikhutshwe ngaphandle kwebhadi kwisikolo esiphakeme, unokufuna ukuqwalasela ngaphezulu, i-er, isixazululo sewashi eligunyazisiweyo: Iwashi elincinane elizikhuphayo ubusuku bokuhlwa kunye nezigxeko, ukubetha ngokukhawuleza, phantsi kombhede, okanye umntu onokuzulazula izitya eziza kubhalisa kwisikali seRichter.
Iilwimi kunye neeTyiliti
Ifoto ifumaneke ngetyala
Umntwana wakho uya kufuna iithawuli ezininzi zokuhlamba kunye ne-flip flops kwi-shower, kunye nesepha, i-shampoo kunye nezindlu zangasese. Kuyinto enhle ukuba ube nebhasikidi enkulu yeplastiki ukuyikhupha yonke into, kodwa jonga indawo yokugcina yokugcina amanzi. Ezinye iindawo zokuhlambela ezidumba zinekhabhi nganye okanye i-lockers, kwaye ubukhulu bunokuthi bube bucala ukusuka kwincinci. Khangela imeko yokugcina xa uhamba ukuya kwi-orientation kwaye ubuze ukuba zonke iidorho zinezindlu zokuhlala ezifanayo. Okanye ulinde uhambe-ngemini uze ungeze umtya onobuchule obungenakukhunjelwa / i-Longs / iBhokisi yeBhokisi enkulu. Kwimeko nayiphi na into, thengisa i-toiletries ukuze umntwana wakho abe ne-toothpaste eyongeziweyo, njl. Ungaphinda ufune ukuthenga i-hook-door-door-to-door towels.
Ingane yakho iyakufuna i-detergent, softener tool, ingubo yokuhlamba okanye inqabana, kunye nejeti yeekota, ngaphandle kokuba ikholeji yakhe isebenzisa amakhadi okutshintsha kwi-laundromat ... kunye, ukuqonda ngokucebisa indlela umatshini wokuhlamba osebenza ngayo kwaye kwenzekani xa kubomvu T Iingubo zihlanjwe ngeengubo zangaphantsi ezimhlophe. (Nangona ukukrola Umbala weCatchers kusebenza ngokwenene) Qhathanisa amaxabiso kuMbala weCatchers apha.) Ukuthumela umntwana wakho kunye nomkhwa ofanayo wokuhlamba umlenze usebenzisa ekhaya uya kwenza amakhishithi akhe, amathaphu kunye nezambatho zivumba ngokuziqhelanisa.
Ifoto ifaneka nguSteve Woods, Stock.Xchng
Umntu omtsha omtsha uza kufuna isibane sedesksi kunye nama-bulbs, izixhobo zesikolo (iincwadi zokubhala, ipensela, ipenki), i-calculator graphing, i-cord extension kunye ne-power strip ene-protective protective, i-laptop kunye ne-flash drive. Into asenakuyidinga ngumshicileli. Ezinye izikolo zifuna amaphepha aphendulwe ngekhompyutheni, ngokuqhelekileyo ngokusebenzisa iiwebhsayithi ezifana ne-Turnitin.com, ezitshekisha ukuhlambalaza. Isikolo ngasinye sinika amalungelo okushicilela ngelayibrari.
I-Mini-Fridges & Izixhobo
Ifoto enomdla kaMarcelo Moura, i-Stock.Xchng Photos
I-friji encinane, i-microwave (ukuba ivumelekile), umbane wombane (ngenxa yeendleko ezingenakho umoya) Akubalulekiyo: umatshini wokuphendula umhlaba. Kodwa qiniseka ukuba umntwana wakho uhlola i-dorm imithetho kuqala. Ezinye izidumba ezindala azivumeli ii-microwaves, umzekelo. Mcebise ukuba axoxe ngokuthi ngubani oza kuzisa naye kunye naye, kwaye acinge ngokuqeshisa ngokuqeshisa, kunokuba athenge i-friji encinane. Ukugcinwa kwehlobo kuyingxaki enkulu, kwaye amathuba okuba umfundi wakho uza kuthungela kwindawo yokuhlala yangempela enefriji yangempela ngumnyaka omncinci.
Ukugcinwa kweebhondi kunye namaHlomelo
Ifoto ifoto kaSergio Roberto, Stock.Xchng Photos
Uninzi lwezixhobo zokugcina izinto ezimakethi zithengiswa kwisihlwele esingenazo kwiikholeji azidingekile kwaye izinto ezimbalwa azisebenzi kuwo wonke umntu - ezo zidwebi zokumangalisa, ngokuqhelekileyo, zincinci ukuba zingabamba ngaphezulu kweebini zangaphantsi kunye abadwebi abayilayidi. Oko umntwana okwenene kuyimfuneko ukuxhoma i-closet kunye ne-storage bins phantsi kwebhedi. Khetha iibhola ze-Rubbermaid-style tubs ezingakwazi ukubamba i-tack of twels, i-quil of sweatshirts okanye iibhokisi zokutya eziza kuzuza. Kufuneka ube nokukwazi ukulinganisa ubuncinane amabini amabini phantsi kwebhedi yokulala. I-unit yokugcinwa ekhutshelwe izicathulo inceda ukuba unentombi okanye unyana onokuqokelela izihlangu. Ukuba unyana wakho uthanda i-flip flops, akayi kufuna ukuxhoma nantoni na.
Amanye amaZiko abalulekileyo
Uninzi lwezidumba zibonelela ngeebhodi zeencwadana, iibhokisi zeencwadi kunye neebhasikiti ezinkunkuma. Uyakufuna ukubonelela iimbotyi, kunye neebhonki zeplastiki ukuze udibanise inqabhoko yenkunkuma (kwaye ukwandise iingxaki eziza kuthiwa udoti). Kwakhona kunika ithuba lokuba: ilayiti yamaphilisi ephepha, izicubu, ikiti yokuncedisa kuqala, ukutya okutywala, isitya sokutya, i-spoon kunye nekgayi e-microwavesable.
Iholide yeDor & Iifoto
Iifowuni, iifoto zeentsapho, imithwalo epholileyo kunye nebhedi ye-teddy inceda ukunyusa igumbi kunye nokunciphisa i-sleepiness-iness yayo. Ukuphosa, ukuphosa kweentambo kukubambisa ukuchukumisa. Ungacingi ukuba umntwana wakho unokuxhoma izinto kwiindonga. Uninzi lwezidumba zinezindonga zebloko zendonga, okanye imigaqo malunga neentsimbi kunye nezipikili, ngoko cinga ukulula okanye ukuzimela. Abanye abafundi basebenzisa itheyipu - kunye neziphumo ezixubekileyo - ukuxhoma iifowuni kunye neefowuni zeekholeji, okanye baqhubela isitya esikhulu esinokusila ngokubhekiselele eludongeni kunye nemifanekiso yepini, iifoto zeetoto okanye iingubo zegolide.
Ukhetho, Kodwa Uyamthanda Ukuba
Indawo epholileyo, enemibala egqabileyo yenza umgangatho ongcolileyo ukhangeleke. I-Easy-to-store, i-collapsible seating or pillows pillows yenza abahlobo bazive bevulekile, kwaye abanye abafundi bathi bathanda ukugcina isikhwama sokulala esandleni sabathengi bobusuku. Kwakhona kuhle kakhulu ukuba: i-headphones yokukhwaza ingxolo, isikhululo se-iPod kunye nezithethi, kunye nencwadi eyintandokazi okanye ezimbini ukusuka ekhaya. Abafundi bawabiza ngokuthi "iincwadi zokuthuthuzela." Ufuna ezinye? Thatha izinto ezi zinto ezintshontsho ezintshontsho ezinhlanu. Impilo yakho yentsapho kunye nenwabe ayinakho ukuphumla ekubeni nekhalenda epholileyo, enkulu, eyomileyo yokumisa ukudibanisa ideskiti yakhe, kodwa ngokuqinisekileyo into enhle ukuba nayo!
I-Dorm Shopping List
Ulungele ukuthenga? Okanye uhlasele iiflothi zakho? Landa lo uluhlu lokuthenga i-dorm ukuze ungadingi i-laptop yakho kunye.
Kwi Campus vs. Off Campus
Kuphi Ukufumana Ubumfihlo kwiKholeji
Abaculi kwi-60 Seconds: Cecilia Beaux
Izakhono eziSebenzayo zeMathematika ezixhasa ukuzimela
Puck kwi 'Dream Night Midsummer'
Ikhamera Lucida: I-Optical Illusion for Artists
Malunga neNBA Playoffs
Qulunqa isenzi sesiNgesi esingaqhelekanga 'Se Souvenir' ('Ukukhumbula')
Amaqiniso Ngayo Inyanga KaJuni
Incwadi Yomxholo YesiJamani
I-1990 / Imfazwe yaseGulf